Mampahafantatra ny Visual Storytelling · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2019 3:53 GMT
Iray amin'ireo fivoriana tamin'ny fihaonan'ny Fiarahamonina Global Voices nankafiziko indrindra ny resadresaka momba ny fitantarana ara-maso avy amin'ny tale mpanatanteraka ao amin'ny GV, Ivan Sigal. Nijery ny fomba ahafahana mampitombo ny teknolojiam-baovao sy ny fifandraisana ary ny sehatra an-tserasera mba hampisehoana tantara amin'ny fomba vaovao ny fifanakalozan-kevitra.
Ny fisandratan'ny aterineto, ny media sosialy, ny vondrom-piarahamonina an-tserasera, ary ny fidirana lehibe amin'ny fitaovana vaovao sy ny teknolojia ao anatin'ny sarangan'ny olona midadasika no nitarika ny fampivoarana ny fahasamihafana eo amin'ny mpihaino sy ny mpamokatra ary nanokatra lalana ho amin'ny fampiroboroboana ny votoaty avy amin'ny mpiserasera.
Avy amin'ny teknolojia tranainy toy ny printy sy horonantsary izay endrika tsotra loatra manao tsinaimbalala ny ankabeazan'ny votoaty ao amin'ny aterineto. Tsotra loatra manao tsinaimbalala ny boky. Mamadika ny pejiny ianao mandrapaha-tonga any amin'ny farany. Mandritra izany fotoana izany, mitondra anao any amin'ny sehatra iray mankany amin'ny iray hafa amin'ny fizotra tsotra araka ny fandehan'ny fotoana ny sarimihetsika.
Mahavita izany ny teknolojia vaovao amin'ny fanovana ny fomba fijerintsika sy ny firesahana tantara amin'ny hevitra tsy hita maso ihany fa koa ifarimbonana sy tsy tsotra loatra toy ny tsinaimbalala.
Afaka mifandray amin'ny votoaty izay novokariny manokana ny mpiserasera. Mahatonga izany ho afaka manova ny endrika tsirairay amin'ny adiresy url (rohy) sy tags manokan'izy ireo ny fitaovana vaovao, izay ahafahana manomboka na aiza na aiza ao anatin'ny tantara ara-maso.
Anisan'ny sehatra fitantarana tantara ifarimbonana ara-maso mahazatra indrindra ao amin'ny aterineto ny tranonkala fizarana sary avy amin'ny mpiserasera . Anisan'ireo fitaovana fototra sy ambaratonga antonony tsy mila fahalalana momba ny kaody ny:
Cowbird.com – izay mamaritra ny tenany ho toy ny tranombokim-bahoaka amin'ny zavatra iainan'ny olombelona ary fitaovana tsotra hampitana tantara.
Vine.co – fampiharana finday izay manampy amin'ny famoronana lahatsary mihodina.
Zeega.com – izay manampy amin'ny famoronana lahatsary ifarimbonana avy amin'ny votoaty hita ao amin'ny aterineto.
Korsakow.org – programa azo trohana izay manampy amin'ny famoronana filma ifarimbonana sy mamelona amin'ny alalan'ny tahiry goavam-be, na angona sary.
Klynt.net – fitaovana iray ahafahana mamorona sy mamoaka mash-ups.
Ny tranonkala netstories.org/tools dia manasongadina ny lisitr'ireo fitaovana marobe izay azo ampiasaina hampahafantarana tantara ary hampandray anjara ireo mpitsidika an-tserasera. Azo jerena ao amin'ny thewhalehunt.org, docubase.mit.edu, nfb.ca/interactive, ary pbs.org ireo ohatra amin'ny tantara ara-maso.
Ao anatin'ny fitobaky ny vaovao sy sary an-tserasera mahazatra izay manototra antsika isan'andro, nilaza i Sigal fa afaka manampy antsika hanamafy indray ny lanjan'ny tantara ireo fitaovana ireo.